कलियुगका कुरा: August 2013
शान्ति प्रकृया अझै भाँडिएन?
अख्तियारले भ्रष्टचारी भन्दै भकाभक पक्राउ गर्न थालेपछि तीन ठूला पार्टीका कर्मचारी संघले सामुहिक बैठक गरेर बिरोध गरेछन् । तर अहिलेसम्म पनि अख्तियारको 'यो कदमले शान्ति प्रक्रिया भाँडिने खतरा भो' भनेर कसैले किन नभनेको होला भनेर अचम्म मानिरहेछु।
तीज दरमा प्रहरी
जिल्लाबाट आ'र राजधानी बसिरहेकाहर्ले तीजको दरखाने कार्यक्रम राखेका थे, नयाँ बसपार्कको एउटा रेष्टुरेन्टमा। दुई सय ५० जति थे महिला पुरुष सराबरी। एक जना प्रहरी इनिस्पेक्टर ५ प्रहरी लिएर आए। तीज भड्किलो नबनाउन निर्देशन दे'को अख्तियारले पुलिस पठाएछ भनेर सातो मात्र गएन, तिजको दर खाँदा पक्राउ पर्ने पुरुषमा नाम आउने भो भन्ने शंकाले मनै अमिलो भो। तर प्रहरी इनिस्पेक्टर र साथीभाइबीच केहीबेर भालाकुसारीपछि इनिस्पेक्टर आफ्ना ५ प्रहरीसँगै दर खाएर डकारेर हिंडे।
अदालतले के के मात्र गर्नुपर्ने हो
अस्करमा पठाउने फिलिम पनि सर्वोच्च अदालतले छान्न पर्ला जस्तो भो। छनौट समितिले 'सुनगाभा' पठाउने निर्णय गरेको विरोधमा 'वधशाला' निर्माण गर्नेहरु अदालत जाने भएछन्। बिचरा सर्वोच्च! सरकारै चलाउँदा पनि शान्ति पाएन।
सबै दलका शिर्ष नेतागण र फेसबुक, टि्वटरका जनतागणको कुरा सुन्दा लाग्दैछ अरु दुई चार वर्ष बाँचेका भए मरिचमान सिंह फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेरहेछन् । मरिचमानको यति धेरै गुणगान (उनी जस्ता राष्ट्रवादी, सदाचारी नेता नेपालले पाएको छैन भने नेताहरुले) गाएपछि २०४६ सालमा 'मरिचे चोर देश छाड' भन्ने नारा लगाउने तिनका कार्यकर्तालाई अहिले कस्तो लागिरा' होला
यसपालि शान्ति प्रकियाँ भाँडिएला
अस्ति नै डेकेन्द्र थापाको हत्या अभियोगमा केही पक्राउ पर्दा पनि प्रचण्डले 'छानबिन नरोकिए शान्ति प्रकिया भाँडिन्छ' भन्थे। खोई भाँडिएको थाहा पाइएन। अहिले फेरि गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा 'अनुसन्धान गरे शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ भनेछन्' उनै प्रचण्डले। यसपालि चाहिँ भाडिन्छ कि भाँडिदैन होला?
प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलबारे नयाँ कुरा (भ्रामक?)
चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बसमा सामाखुशीबाट सानेपासम्म आउँदा यात्रुले गरेका दुई गफ।
क) प्रचण्डको ससुरा त क्रिश्चियन रहेछन्। क्रिश्चियनिटी बढाउन ठूलो रकम उनको हातमा आउँदो रहेछ। त्यसैको डिजाइनमा सबै कुरा भइरहेको छ।
ख) रामचन्द्र पौडेलले बै‌कमा पैसा राख्दैनन् अख्तियारले थाहा पाइहाल्ला भनेर। काठमाडौं र तनहुँका धेरै फाइनाइन्स कम्पनीमा दुई/चार लाख, दुई/चार लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। फाइनाइन्सको सबै खाता त कसले पो हेर्ला भनेर।
पैसा नभएर हैन है, मैले मोटरसाइकल/गाडी नचढेको। बसमा नहिंडे यस्तो गफ कहाँ सुन्न पाइन्छ र? (के गर्नु अंगुर अमिलो छ भनेर चित्त बुझाउनै परो)